Lafa-Gur Sharci Oo La Xidhiidha Qarraarka Maxkamadda Sare Ay Ka Soo Saartey Khilaafka U Dhexeeya Dugsiyada Gaarka Loo Leeyahey Iyo Wasaaradda Waxbarashada & Sayniska Oo Lagu Muransanaa | Himilo Media Group
Halkan waxa aan ku soo gudbinaya fallanqeyn aan ka sameeyey Qarraarka Maamul ee ka soo baxey Maxkamadda Sare Qaybta Idaariga ee Summadiisu tahey MS/GMS/G-7/523/2019 ee soo baxey 22/10/2019. Qarraarkaas oo la xidhiidhey khilaaf ka dhex taagnaa Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska, iyo Dugsiyada Gaarka loo leeyahey, lana xidhiidhey Xeer Nidaamiye ay Wasaaraddu soo saartey oo tixraaciisu yahay moe/s/01/186/18, soona baxey 30/11/2018, inuu khilaafsan yahey Xeerka Waxbarashada Qaranka XLR 77/2018. Iyo Go’aan Maamul oo ka soo baxey Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska ee tirsigiisu yahey PSc/22/09/2019, ee ku taariikhaysan 15/10/2019. Go’aankaasoo ah digniin inay dugsiyada Gaarka loo leeyahey ruqsada cusbooneysiin qaataan muddo bil Gudaheed ah, isla markaana u hoggaansaman nidaamka iyo xeerarka Waxbarashada, dugsigii diida inuu ruqsada cusbooneysiinta sanadlaha ahna laga joojin doono imtixaanka Shahaadiga ah, sidoo kalena laga laalayo ruqsada waxbarasho.
Ka hor arrintani inta aynaan u galin Qarraarka Maamul ee Maxkamadda Sare, dugsiyada Gaarka loo leeyahey waxey cabashadoodan u gudbiyeen Golaha Wakiillada iyo Guurtida, oo ka soo kala saarey Go’aano ay ku sheegayaan in Xeer Nidaamiyuhu Khilaafsan yahey Xeerka Waxbarashada. si kooban su’aashu waxey tahey Guurtida iyo Wakiillada oo leysku yidhaahdo Baarlamaanku ma ka go’aan haddii is khilaaf uu ku yimaado Xeer iyo Xeer Nidaamiyihiisa? Jawaabta oo kooban waa maya, maadaama ay yihiin Hay’ad Sharci Dejin. Waxaana awoodahooga qeexaya Qodobadda 53, 54, 55, iyo 61 ee Dastuurka.
Halkaa waxa ka muuqata marka hore ba meesha ay dacwada u gudbisteen Dugsiyada Gaarka loo leeyahey ay khaldaneyd, Golaha Baarlamaankuna kuma uu joogsan arrinkaas, kumuna koobnaan awoodahiisa Dastuuriga ah ee wuu iska galey go’aano wuu ka soo saarey!., go’aanadaas oo ah kuwo baalmarsan Sharciga iyagoo ku xadgudbay Qodobada.97,98 Ee Dastuurka oo sheegaya marka hay’adaha dawladda iyo dadka shicibka ah.
Si kastaba ha ahaatee ugu danbeyn dugsiyada Gaarka loo leeyahey waxey cabashadooda usoo gudbisteen Maxkamadda sare, oo guud ahaan marka loo eego ah meesha saxda ee ay tahey iney khilaafyada noocan oo kale ah ka go’aan gaadho, sida ku cad Qodobadda 97 iyo 98 ee Dastuurka JSL.
Balse nasiib darrooyin kale oo hor leh ayaa haddana ka soo if baxey qaabka loo maamuley dacwadoodaas iyo guud ahaan sidii loo baalmaray murankii sharci.
Ujeedada qoraalku lama xidhiidho inaan gudo galo dullucda la xidhiidha inay is khilaafsan yihiin Xeer-Nidaamiyaha Waxbarashada Gaarka ah iyo Xeerka Waxbarashada Qaranka.
Balse lafa-gurkan sharci waxa uu ku kooban yahey oo kaliya nidaamka sharci ee ay Maxkamadda Sare uga go’aan gaadhey Qarraarkeedan Maamul; waxana aan isku dayi doona inaan ka jawaabo su’aalahan sharci.
Qarraarkani ma yahey mid sharciga waafaqsan mise waa mid iska hor imanaya?.
Qarraarkan Maxkamadda sare ma sameeyey tafsiir sharci oo ma ka jawaabayaa Xeerka Guud iyo xeer nidaamiyaha inay is khilaafsan yihiin iyo inay is waafaqsan yihiin iyo qodobada ka hor imanaya xeerka guud.
Si aad qoraalkan u fahanto waxa aad u baahan tahey inaad akhrido lifaaqa dambe ee ah Qarraarka Maamul ee ay Maxkamaddu soo saartey, maadaama uu yahey ka halkan aynu ku lafo gureyno.
Waana sidan faalladeyda la xidhiidha Qarraarka Maamul ee Maxkamadda Sare Qaybta Idaariga ee Sumadiisu tahey MS/GMS/G-7/523/2019 ee soo baxey 22/10/2019
Ugu horreyn, waxaan kala cadeyn in Guddida Dugsiyada Gaarka loo leeyahey cidda lagu sheegayo ay Maxkamadda Sare Qaybteeda Idaariga u soo Gudbiyeen arji cabasho amase uu ahaa Arji dacwad furasho, sababtoo ah Qaraarka Maamul ee Maxkamadda sare waxa is dhex socda oo ka wada muuqda in meelaha qaarna ay ku sheegayso arji cabasho sida ku qoran asbaabta ugu horreysa ee qarraarka, isla markaana ay meelo kale ku sheegeyso arjiga dacwad furasho sida ka muuqata farqada 1aad ee Go’aanka Qarraarka Maamulka ee dacwad Furashada.
Maxkamaddu waxaad moodaa iney aqoonsatey Guddi Dugsiyada Gaarka loo leeyahey ‘waxa is weydiin leh’ ma jirtaa dallad ay ku midoobeen Dugsiyada Gaarka loo leeyahey oo Guddidan siineysa jiritaan sharci, jawaabta oo kooban waa Maya.
Nuxurka arjiga ama cabasho noocu doonaba ha ahaade ee ay soo gudbisteen cidan lagu sheegayo Guddida Dugsiyada Gaarka loo leeyahey waxa ku xusan ee ay ka cabanayaan waa laba arrimood:
a). Xeer Nidaamiyaha waxbarashada Gaarka ah – (ref moe/s/01/186/18, soo baxey 30/11/2018).
b). Go’aan Maamul oo ka soo baxey Wasaarada Waxbarashada iyo Sayniska ee tirsigiisu yahey PSc/22/09/2019, ee ku taariikhaysan 15/10/2019.
Labadan arrimood ee is huwan dabeecada dacwad ee ay noqonayaan waa ay kala duwan tahey (nature of the case), oo marka ay go’aanka Maamul ee Wasaaradda Waxbarashada ka dacwoonayan, nooca dacwaddu waa mid Idaari ah (administrative case) waxaana laga furanaya Maxkamadda Sare Qaybta Idaariga ah sida ku cad Qodobadda 9aad (4)(c) ee Xeerka Nidaamka Garsoorka XLR 24/2003.
Balse marka ay ka dacwoonayaan in Xeer-Nidaamiyuhu ka hor imanayo Xeerka Waxbarashada Qaranka XLR 772018. Gaar ahaan qodobadda 4aad, 5aad (2), 10aad (1), 11aad (8,10,11), 14aad, 15aad, 16aad (8,10), 17aad (3) iyo 23aad. Dacwaddan nooceedu waa mid la xidhiidha fasiraad sharci, maadaama loo baahan yahey inay Maxkamaddu eegto kana soo saarto fasiraad la xidhiidha in Xeer Nidaamiyuhu uu ka hor imanayo Xeerka Waxbarasahda iyo inkale. dacwadaas oo hoos tageysa Maxkamadda Dastuuriga ah, sida ku cad qodobka 6aad (4)(b) ee Xeerka Nidaamka Garsoorka XLR 24/2003, oo dhigaya “inay macnayso fasirtana Dastuurka iyo xeerarka kale ee dalka lagaga dhaqmayo, marka laysku qabto ujeedadooda”
Labada dacwaddood ee qaybaha kala duwan ee Maxkamadda kala hoos tagaya ayey meel isku geeyeen Guddidaa Dugsiyada Gaarka ah cidda sheeganeysa, taasi oo marka horeba nidaam daro ah.
Maxkamadduna kuma ay xusin Qarraarkeeda in labada arrimood ee ay ka cabanayaan ay tahey laba arrimood oo aan hal dacwad la wadaajin karin maadaama uu kala duwan yahey dabeecadooda dacwad ahaaneed.
Waxa arrin lala yaabo ah, arrinta la xidhiidha ka cabashada Go’aanka Maamul ee Wasaaradda Waxbarashada ay Maxkamaddu xustey in Wasaaradu awood u leedahey wax ka qabashadeeda, isla markaana ay Maxkamaddu Wasaaradda u deysay iney ka go’aan gaadho, sida ka muuqata farqadda 1aad ee go’aanka Qarraarka Maamul. Taa oo macnaheedu yahey Wasaaradda Go’aankeeda waa ay ku socon kartaa fulintiisa waana ay hakin karta maadaama go’aanka Wasaaradda loo daayey waxka qabashadiisa. Waxana xusid mudan in go’aanka Wasaaradu ee cusbooneysiinta Ruqsada ee sanadlaha ah ay ka mid tahey waxyaalaha ay diidanayan dugsiyada gaarka loo leeyahey qaar ka mid ah, waana qodobadda xeer nidaamiyaha ku jira ee khilaafku ka taagan yahey, gaar ahaan qodobka 5 ee Xeer Nidaamiyaha.
Maxkamaddu go’aankeeda la xidhiidha arrinka xeer Nidaamiyaha Waxbarashada Gaarka loo leeyahey, kuna fareyso Wasaaradda Waxbarashadu inay dib u eegis ay ku sameyso Xeer nidaamiyahaas.
Taas macnaheedu waxay noqoneysaa in dacwadii idaariga aheyd Maxkamaddu waa ay diidey, balse mid aan idaari aheyn oo la xidhiidha fasiraada sharci ee inay is khilaafsan yihiin Xeer-nidaamiyaha iyo Xeerka Waxbarasahadu ay go’aan ka soo saartey. Iyadoo adeegsaneysa magaca Maxkamadda Sare Qaybta Idaariga ah, haddaba su’aashu waxay ma arrin idaari ah ba marka dacwadu la xidhiidho in Xeer Nidaamiye ka hor imanayo ama khilaafsan yahey Xeerkii asalka u ahaa?.
Waa arrin is diido ah, maadaama uu Qarraarkani ka soo baxey Maxkamadda Sare qaybta Idaariga ah, go’aankuna u la xidhiidho arrin ay aheyd in fasiraad Maxkamadda Dastuuriga ah ka soo saarto iney is khilaafsan yihiin Xeer Nidaamiyaha iyo Xeerka Waxabrasahda iyo inkale.
Waxa kale oo is khilaafsan iney Maxkamaddu Qarraariso in Go’aankana wasaaradda loo daayey wax ka qabashadiisa, halka xeer nidaamiyahana dib ha loo eego la farrayo Wasaaradda iyadoo lagu ciladeynayo inuu khilaafsan yahey Xeerka Waxbarashada waa laba arrimood oo iska hor imanaya, maadaama go’aanka qayb ka mid ahi Xeer Nidaamiyaha ku dhisan tahey oo uu leeyahey “Dugsiga ruqsada sanadlaha ah diida, imtixaanada shahaadiga ah ayaa laga joojin isla markaana ruqsadana dugsina waa laga laali”!.
Waxa kale oo arrin lala yaabo ah, in Maxkamadda Sare ay Qarraarisey iney Diidey Arjiga dacwad furashada ee ay soo gudbisteen Guddida Dugsiyada Gaarka loo leeyahey. Halka ay ka raacisey haddana iney qayb ahaan ogaalatey cabashadooda. Taa macnaheedu waxa ay tahey inay is khilaafsan yihiin farqada 1aad iyo farqadaha 2aad iyo 3aad ee isla go’aanka Qarraarka Maamul ee Maxkamaddu.
Sababtoo ah nidaamka sharci ee dacwad furashadu waxa uu si kooban yahey iney Maxkamaddu ka ogalaato ama ka diido cidda u soo gudbisata dacwad, iyada oo loo eegayo sharciga.
Haddii la ogaalado nuxurka dacwadda ayaa la gudo galaya iyo arrinta muranku ka taagan yahey, balse haddii la diido arjiga dacwad furashada dhinicii soo gudbistey halkaa ayey ku xidhmeysaa dacwadu loomana galayo nuxurka cabashada ee dhinacaasi soo gudbistey.
Sidaa awgeed sharciga ayey khilaafsan tahey inay Maxkamadda Sare iyada oo diidey arjigi dacwad furashada, haddana labadii arrimood ee looga soo dacwoodey ay mid ahaan u xukuntey oo ah in Xeer-Nidaamiyaha dib loo eego oo uu khilaafsan yahey Xeerka Waxbarashada.
Halka mid kala labaadna ay Wasaarada u xukuntey oo ay Wasaaraduna go’aankeeda sii wadan karto, maadaama Wasaaradda loo daayey arrinkaas. Oo ay Maxkamaddu Qarraarisey inay Wasaaraddu u madax bannaan tahey Go’aankeeda maamul.
Waxa intaa dheer Go’aanka Qarraarka Maxkamaddu dhinac wuxuu dalbanayey u xukuntey, Maadaama loo xukumey in Xeer nidaamiyihi ay lahaayeen ma waafaqsan Xeerka Waxbarashada lagu raacey. Haddana ay Maxkamaddu ka dhigeyso dacwad ay diidey arjigooda.
Haddii aynu si kooban u eegno ujeedada dacwad furashada ee ay lahaayeen Guddidaas lagu sheegay Dugsiyada Gaarka ah waxey aheyd in xeer nidaamiyaha laga dhigo mid khilaafsan Xeerka Waxbarashada. sidaas darteed Go’aanka Maxkamaddu wuxuu ka dhigan yahey arjigii dacwaddana waan kaa diidey haddaad Guddidaas tihiin, waxaad rabteena waan idin xukumey.
Waxa kale oo xusid mudan inaaney cadeyn Qodobadda dib u eegista u baahan ee ku jira Xeer-Nidaamayaha ee ay Maxkamaddu go’aamisey iney ka hor immanayaan Xeerka Waxbarashada iyo sababta loogu aqoonsadey qodobadaas iney ka hor imanayan Xeerka Waxbarashada;
Sidoo kale waxa khaldan qaar ka mid ah Qodobada loo adeegsadey Qarraarka oo uu ugu horreeyo Qodobka 159XHM, oo ka hadlaya in Garsooruhu weydiinayo qoraalada been ee dhinac soo gudbisto inuu ku adkeysanayo in dacwadiisa uu u isticmaalayo iyo inuu ka tanaasulayo oo laga saaro cadeymaha uu soo gudbistey. Waxa arrin lala yaabo ah sababta ay Maxkamaddu ugu adeegsatey qodobkan oo kale Qarraarkeeda?.
Waxa kale oo xusid mudan in Guddoomiyaha Maxkamadda sare uu ku lifaaqey Qarraarkan Maamul warqad uu faafinayo oo ujeedeeda uu ka dhigey Gudbin Qarraar Maamul. Warqadaas uu ku lifaaqey oo sharciyan meel ay ka waafaqsan tahey aaney jirin, oo Qarraarada ka soo baxa Maxkamadaha Guud ahaan loo qaybiyo dhinacyada ay quseyso. Haddana waxa intaa dheer in warqada lifaaqa ee Guddoomiyaha uu ku darey natiijo dheeraad ah oo ah inuu farayo Wasaaradda inaan lagu fulin Xeer Nidaamiyaha ilaa inta dib u eegis ay ku sameynayaan Wasaaraddu.
Ugu danbeyntii, dacwadan dhinac keliya ayuun baa arji soo gudbistey oo ah Guddida isku sheegay Waxbarashada Gaarka ah, wax laga diido iyo wax laga yeelaba waa laga dhigey, waxa cad inaan dhinacii kale loo yeedhin, isla markaana aan la siin wax fursad ah oo ay kaga jawaabaan waxyaalaha lagaga cabanayo. Taasina waa mid ka hor immaneysa danta caddaaladda “principles of Natural justice” iyo Qodobka 28 ee Dastuurka Qaranka JSL.
Waxaana waliba sidaan hore ku soo sheegnay loo xukumey dhinaca keliya maadaama wixii ay codsanayeen ee ahaa Xeer Nidaamiyaha Waxbarashada Gaarka loo leeyahey inuu ka hor immanayo Xeerka Waxbarashada.
Intaas ayaa ugu waaweyn Goldaloolooyinka ka muuqda Qarraarka 3 bog ah iyo Warqada faafinta ah ee uu Guddoomiyaha Maxkamadda Sare raaciyey ba ee hoos ku lifaaqan.
Garyaqaan: Yuusuf Biixi Muxumed
Halkan ka Akhri Qarraarkii